दुई ग्रह जहाँ हिराको वर्षा हुन्छ
एजेन्सी । धर्तीमा मानिसहरुलाई थाहा छ हिराको मुल्य कति पर्छ । कतिपय मानिसहरुको जीवन त एउटा हिरा किन्नमा नै जीवन सकिन्छ ।
जब यी चोरले राष्ट्रपति भवन नै बेचिदिए
एजेन्सी । उनको नाम नै छ काफी । ठगको पर्यावाची नाम हो नटवरलाल । उनको नामलाई लिएर विभिन्न उखान समेत दिने गरिन्छ ।
भुलेर पनि सुत्ने कोठामा यस्ता समानहरु राख्दै नराख्नुहोस्
एकअर्कालाई थप्पड हान्ने प्रतियोगिता
एजेन्सी । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो व्यापक भाइरल भइरहेको छ । उक्त भिडियो एउटा थप्पड प्रतियोगिताको हो ।
यी हुन् अष्ट्रेलियाका अति नै व्यस्त एयरपोर्टहरु
एजेन्सी । एयर ट्राफिकको कुरा गर्ने हो भने अष्ट्रेलियाको सिड्नी एयरपोर्ट विश्वकै व्यस्त एयरपोर्टको रुपमा परिचीत रहेको छ । त्यस्तै मेलबर्न एयरपोर्ट पनि उत्तिकै व्यस्त एयरपोर्टको रुपमा परिचीत रहेको छ ।
यी हुन् विश्वकै धनी देशहरु, अष्ट्रेलिया कति औँ स्थानमा ?
एजेन्सी । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा विश्वकै धनी देशहरु कुन कुन होलान् ?
यी देशहरु जसको नाममा छैन ‘ए अक्षर
विश्वमा हाल १९५ वटा देशहरु रहेका छन् । तीमध्ये १९३ देश युनाइटेड नेशनका सदस्यहरु रहेका छन् । दुई देश होली सि र प्यालेसटाइनलाई देशको मान्यता दिइएको छैन ।
मर्नु अघि किन हुन्छ मानिसको बोली बन्द ? यस्ता छन् कारणहरु
काठमाडौं । जिन्दगीको सबभन्दा ठूलो सत्य भनेकै जन्म र मृत्यु हो । जन्मेपछि अवश्यै मर्नुपर्छ र कहिले मरिन्छ भन्ने कसैले थाहा पाउँदैन ।